Dhaqanka iyo Hiddaha, 01 January 2014 page 1
Dhaqanka iyo Hiddaha # 181
Dhaqanka iyo Hiddaha # 180
Dhaqanka iyo Hiddaha # 179
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore kaga hadleen qiimaha "Caanaha".
Dhaqanka iyo Hiddaha # 178
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore ka sameysey duur-joogta, gaar ahaan howraarta loo saariyo Raha ee dabeed maahmaahaha reebay.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 177
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore ka sameysey duur-joogta, gaar ahaan howraarta loo saariyey Goroyada ee dabeed maahmaahaha reebay.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 176
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore ka sameysey duur-joogta, gaar ahaan biciidka ee dabeed maahmaahaha reebay.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 175
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore ka sameysey duur-joogta, gaar ahaan Shabeel barabaraale.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 174
Dhaqanka iyo Hiddaha iyo Qeyb kale oo ka mid ah Suugaanta Duunyada iyo Duur Joogta
Dhaqanka iyo Hiddaha # 173
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad todobaadkan ku maqli doontaan qayb kale oo ku saabsan murtida iyo maahmaahaha ay Soomaalidu u saariso dugaagga iyo duurjoogta.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 172
Dhaqanka iyo Hiddaha # 171
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad todobaadkan ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maahmaahyaha ka warama Xeeladda Dawacada, iyo sida ay uga badbaaddo xawaayaanka kale ee duurka ay wada joogaan, kana tabarta badan.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 170
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad todobaadkan ku maqli doontaan qeybtii 5-aad ee Murtida iyo Maahmaaha ay Soomaalidu Dhurwaaga u saariso.